Famahanana bilaogy amin’ny fiteny Kambodziana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2018 6:17 GMT
Masoivohom-panjakana manara-maso ny politikan'ny fifandraisan-davitra ao amin'ny firenena ny NIDA, (Fahefana Fampandrosoana ny Teknolojian'ny Fampahalalam-baovao Nasionaly). Mandrisika ny fampiroboroboana sy ny fametrahana ny rindrambaiko Open Source ny politikan'ny Teknolojian'ny Fampahalalam-baovao an'ny Governemanta Kambodziana.
Ny Tetikasa Khmer Open Source no niara-niasa tamin'izany fametrahana izany, tetikasa Fametrahan-toerana ahafahana mampiditra ny teny Khmer amin'ireo fampiasa manana endrika isankarazany sy ny rafitra fikirakirana (système d'exploitation) ny vao haingana indrindra. (Manolotra ny pikantsary avy amin'ny Da, injenieran'ny rindrambaiko miasa ao amin'ilay tetikasa i Tharum ).
Ahoana ny fomba nampiharan'ny governemanta ny rindrambaiko Open Source sy ny fampiharana ny rindrambaiko amin'ny teny Khmer izay mandrafitra ny tontolon'ny bilaogy Kambodziana? Nandritra ny asara (andro mafana), namoaka rindrambaiko open source ho famahanana bilaogy amin'ny fiteny Kambodziana ny Tetikasa Khmer Open Source ary maherin'ny avo roa heny ny isan'ny bilaogera voasoratra anarana, niainga tamin'ny 100 isa ho 205 isa ny volana Septambra (2005).
Araka ny namakiako ireo lahatsoratra vitsivitsy tamin'ny teny Anglisy, nivadika ho loharanom-baovao mahavariana ity vondrom-piarahamonin'ny bilaogera tanora, kanefa mavitrika ity . Nahitana resaka teknolojia ny resadresaky ny bilaogy izay nitranga, ohatra: ” Ahoana no ahafahantsika mandika ny teny hoe Avitar amin'ny teny Kambodziana? . “Misy ihany koa ny lohahevitra momba ny hetsika ara-kolotsaina, mozika ary angamba politika ihany koa.
Tsy azoko antoka satria voafetra ny fahaizako miteny Kambodziana, noho izany dia fantatro fa betsaka ny zavatra tsy arako. Tsy ela akory izay no naminavinako fa mila bilaogera mpampifandray mahay fiteny roa ny Global Voices mba hamintinana amin'ny teny Anglisy ny sasany amin'ireo lahatsoratra Khmer. Tonga ny fotoana! Ary, Tharum no ilay bilaogera mahaliana mampifandray mahay izay fiteny roa izay!